Tokony hadio eny ivelany sy ao anatiny isika.
"Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo.- Ezek. 36:25.
Mba ho azo ekena eo imason'Andriamanitra, dia hentitra ny fampitandremana nasaina nomen'ny mpitarika niikasika ny fahadiovan'ny tafik'i'Esiraely, eny, fa na dia handeha hiady aza izy ireo. Ny fanahy tsirairay avy, miainga amin'ny manamboninahitra mpitarika ka hatramin'ny miaramila ambany indrindra amin'ny laharam-boninahitra, dia nasaina nitandro ny fahadiovan'ny tenany sy ny manodidina azy. Nofidin'Andriamanitra ho vahoakany manokana mantsy ny Isiraelita. Tsy maintsy masina teo amin'ny tenany sy ny sainy izy ireo. Tsy natao hanao an-tsirambina na kitoatoa ny andraikiny manokana izy ary tsy maintsy nitandro ny fahadiovana teo amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Tsy natao hamela zavatra tsy madio na tsy voalamina teo amin'ny manodidina azy izy na zavatra handoto ny fahadiovan'ny tontolo iainana. SDABC 1:1119.
Tsy afaka ny ho velona ao am-pon'ny olona manana fahazarana mikorontana sy voretra ny Didy Folo naloaky ny vavan'Andriarnanitra avy teo Sinay. Raha ny Isiraely fahiny aza tsy afaka nihaino ny fanambarana io lalàna masina io, rehefa tsy nankatò ny baikon'Andriamanitra ka nanadio ny fitafiany, fomba ahoana no hahatonga izany lalàna masina izany ho voasoratra ao am-pon'ny olona tsy manam-pahadiovana eo amin'ny vatany sy ny fitafiany ary ny trano fonenany? Tsy ho tanteraka vetively izany. HR, 01 Febroary 1872.
Toerana madio sy masina ny lanitra. Madio sy Masina Andriamanitra. Izay rehetra mankeo anatrehany dia tokony hitandrina ny torolàlany ka hanadio ny tenany sy ny fitafiany. Amin'izany no hanehoany fanajana ny tenany sy fanajana an'Andriamanitra. Tsy maintsy hamasinina koa ny fo. Izay manao izany dia tsy hanala baraka ny anarana masin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiankohofana Aminy kanefa ny fo dia feno loto ary ny fitaflana tsy mandeha amin'izay laoniny. Hitan'Andriamanitra avokoa ireo. Hitany ny fiomanan'ny fo, ny eritreritra rehetra ary ny fahadiovan'ireo izay miankohoka Aminy. SDABC 1:1119, 1120.
Tsy tafalatsaka ao ampon'ny anjely ireo zavatra dinihany eo amin'ny manodidina ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. LI 35, 1901.